ကိုယျခဈြနတေဲ့သူဆီက ကိုယျ့ကို အသိအမှတျပွုတယျ ဆိုတဲ့ လုပျဆောငျမှုတဈခုခုကို ရတဲ့အခါ ပြျောသှားတတျတာ သဘာဝပဲလား...
မငျးရော ကိုယျ့ရဲ့ခဈြခွငျးတှအေပျေါ အသိအမှတျပွုခဲ့ပါရဲ့လား... မသခြောဘူး...
ဘဝမှာ သခြောခဲ့တယျလို့ ယူဆခဲ့မိတဲ့ ခဈြခွငျးထဲမှာ မငျးက အဦးဆုံးပဲ... နထှေကျတဲ့အရပျကို မကျြနှာမူပွီး မငျးရှိတဲ့အရပျဆီကို မြှျောတှေးမိတဲ့အခါ မငျးက နီးနီးလေးကပျရပျနပေမေဲ့ ကိုယျတို့ စိတျခငျြး ဝေးနတေုနျးပဲ...
“အခဈြဆိုတာ မပါဘဲ ကြှနျတျောတို့ ဒီအတိုငျး ပြျောရှငျနတောပဲ" ကိုယျ့ရဲ့ရှမှေ့ာ ရပျနတေဲ့ မငျးက အခြိနျတိုငျး ဒီစကားကိုပဲ ပွောခဲ့တာ.. ကိုယျ့ကို ခဈြတယျလို့ ဖှငျ့မပွောခဲ့တာ.. ကိုယျ့အခဈြတှကေိုတော့ ခဈြမှနျး သိနပေမေဲ့ မသိခငျြယောငျဆောငျတတျခဲ့တာ... ကိုယျ့ကို ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကွငျနာမှုပေးခဲ့ပမေဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နာကငျြမှုတှေ ထပျတလဲလဲ ပေးခဲ့တာ.. သံသရာလညျနသေလိုပါပဲ...
“ဘဝမှာ ထပျခဈြဖို့ ထပျအသညျးကှဲဖို့ ကြှနျတေျာ့မှာ နာကငျြစရာ အသညျးနှလုံးမရှိတော့ဘူး.. ဒါတှေ “မ” လဲ အသိပဲလေ” ခဈြခွငျးကို ကွောကျရှံ့နတေဲ့ ကောငျလေး.. ဘဝမှာ ပြျောရှငျစရာတှကေို ဖယျပွီး တဈကိုယျတညျး အထီးကနျြနခေငျြတဲ့ ကောငျလေးကိုမှ ကိုယျက ခဈြမိခဲ့တာ....
သီခငျြးတှေ ခဈြတဲ့... ဂီတသံစဉျတှကေို မွတျနိုးတဲ့... ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုကို မလိုလားတဲ့,, ကိုယျ့စိတျနှလုံးအတိုငျး သော့ခတျပွီး သီးခွားနခေငျြတဲ့ သူ့မှာ ပြျောစရာဆိုတာ ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲ ရှိခဲ့တာတဲ့... “ပွောရငျ ယုံနိုငျမှာ မဟုတျပမေဲ့ ကြှနျတျောက မ ဘေးမှာ ရှိရငျ ပြျောတယျ”
ခဈြခွငျးဟာ ပေးဆပျခွငျးသပျသပျရယျလား.. ကိုယျ့မှာ ဝခှေဲမရသေးခငျ အခြိနျလေးမှာတငျ ကိုယျလညျး သူ့ဘေးမှာရှိရငျ ပြျောရှငျခဲ့တယျ.. ပြျောရှငျနဆေဲ.. ပြျောရှငျအောငျ ကွံဆောငျနဆေဲပဲ..
နားမလညျနိုငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှကွေားမှာ ကိုယျ့အဖွဈဟာ မုနျးတီးခငျြစရာ.. သူတို့ထှကျသမြှ ဒေါသတှေ ကိုယျ့အပျေါပဲ ပုံခပြါစတေော့ရယျလို့.. ဒီလို ကိုယျ့ဘကျက စတေးရမှုတှေ မြားလာပမေဲ့ သူကတော့ မထုံတကျတေး.. အသိအမှတျပွုဖို့ ဝေးနဆေဲ....
“မိုးရှာရငျ ပြျောဖို့ကောငျးတယျ.. မိုးရထေဲ မကျြရညျတှေ မိုးနဲ့ရောသှားတာ ဘယျသူသိနိုငျမှာလဲနျော” သူထှကျလာနပွေီလို့ ပွောတဲ့အခြိနျကတညျးက ဒီနရောမှာ ရပျစောငျ့နခေဲ့တာ.. သူ ပွောတဲ့အခြိနျထကျ ကိုယျစောငျ့နရေတဲ့အခြိနျက ပိုကွာနသေလိုပဲ...
ကောငျးကငျကွီးက မှုနျမှိုငျး.. မိုးစကျတှေ တအုနျးအုနျး တဒိုငျးဒိုငျး ရှာနတေဲ့ကွားက ကိုယျ့ရဲ့ထီးအနီရောငျလေးကို သူရှာတှနေို့ငျပါ့မလား.. “ဘယျနရောပဲရောကျနနေေ ကြှနျတျောက “မ” ကို တှအေ့ောငျ ရှာနိုငျတယျ” တဲ့ အဲ့ဒီနကေ့ ကိုယျ့ကို သူမတှခေ့ငျ သူ့ကို ကိုယျအရငျတှခေဲ့တာ ကိုယျတို့ ကံဆိုးကွတာပဲ....
အဝါရောငျထီးအောကျကနေ သူ လကျကိုခေါငျးပျေါတငျပွီး ပွေးထှကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ထီးအဝါရောငျအောကျမှာ ကြှနျမ အသအေခြာမှတျမိနတေဲ့ အဲ့ဒီမိနျးကလေးရဲ့မကျြနှာကို တှလေို့ကျရတာ...
“ဘာမှမဆိုငျဘူး... ဒီအတိုငျး သူငယျခငျြးလေ.. “မ” လိုပဲ တဲ့” ကြှနျမတို့က နှိုငျးယှဉျစရာ ပွယုဂျတှေ ဖွဈသှားပါရောလား...
မိုးရထေဲမှာ အကွီးအကယျြ ရနျဖွဈနတေဲ့သူ နှဈယောကျကို ဘေးပတျဝနျးကငျြက သတိမထားမိတဲ့အတှကျ မိုးရကေို ကြေးဇူးတငျမိတယျ.. “မိုးရထေဲ မကျြရညျတှရေောတော့ ကိုယျရော သူရော စိုရှဲကုနျတာပေါ့” ထီးအနီရောငျကို သူ့လကျထဲ ထညျ့ပေးပွီး မိုးရထေဲ ဒီအတိုငျး လမျးလြှောကျပွနျလာတဲ့ ကြှနျမ အနောကျမှာ သူလိုကျလာသလား မလိုကျလာဘူးလား သိခငျြစရာ မရှိတော့တာ...
တဈပတျလောကျ အိပျယာထဲ အဖြားနဲ့လဲနတေဲ့ အခြိနျထဲ ဘယျသူနဲ့မှ အဆကျအသှယျမလုပျဘဲ ဖွတျတောကျခဲ့တာ.. သူချေါတဲ့ဖုနျးတှကေို မကိုငျတာ.. ဖုနျးကို စကျပိတျထားတာနဲ့.. အိမျကို သူ အရဲစှနျ့ရောကျလာတာတောငျ ထှကျမတှခေဲ့တာ.. အလုပျကိုသှားဖို့တောငျ မနညျး အားယူခဲ့ရတာ...
အိပျမကျဆိုးတှထေဲ ထီးအဝါရောငျနဲ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အပွုံးတှကေိုပဲ မွငျယောငျနခေဲ့တာ...
“မ သာ ကြှနျတေျာ့ကို စှနျ့ခှာသှားရငျ ကြှနျတျော ရူးသှားလိမျ့မယျ” သူ ပွောတော့ ကိုယျ့မှာ နာကငျြလှနျးလို့ ပွုံးပွဖို့တောငျ အားမရှိခဲ့.. နောကျဒီလိုမဖွဈစရေပါဘူးတဲ့.. ဘာတှကေို ကတိပေးပွီး ဘယျလိုတှေ ကိုယျ့ဘေးနား သူပိုတိုးကပျခဲ့တာတှကေို မသိစိတျက ပြျောရှငျခဲ့ပမေဲ့ သိစိတျက သူ ကိုယျ့ကို တဈခြိနျခြိနျမှာ ပဈခှာထားခဲ့ဦးမှာ ဆိုတာ သိနခေဲ့တာ...
Extrovert ဆိုတဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသမားနဲ့ Introvert အတှငျးစိတျမှာ ပြျောရှငျတဲ့သူရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဲ့.. ဝဘျဆိုကျတဈခုမှာ ဖတျမိတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျဟာ ကိုယျတို့အဖွဈကို ပိုသဘောပေါကျသှားတော့တာပဲ..
ဒီအတိုငျးလေးနမေယျဆိုရငျ ကိုယျတို့ အမွဲလကျတှဲနနေိုငျမှာပဲ.. ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ဘကျက ဖွဈဖွဈ ရှတေ့ဈလှမျးဆကျတိုးရငျ သူ့ဘကျက ကြိနျးသေ နောကျကို တဈလှမျးမက နောကျဆုတျသှားမယျ ဆိုတာ သိနခေဲ့တာ... သူ့ရဲ့ စိတ်တဇကို မဖွဖြေောကျနိုငျသရှေ့ ကိုယျ့ဘကျက ပေးဆပျရခွငျးသပျသပျသာ သူ့အတှကျ ရှိနပေေးရမှာ...
ကိုယျက လောဘကွီးပါရဲ့,, မငျးအတှကျ သပျသပျလို့ ကိုယျ့ဘကျက သခြောတဲ့ နှလုံးသားစညျးခကျြတှေ အတှကျ မငျးဘကျက အဆငျသငျ့ဖွဈမနတော ဝမျးနညျးလှခညျြရဲ့ကှယျ...
အခုတော့ လမျးဆုံမဉျြးရဲ့ အလယျဘကျမှာ ကိုယျရပျနတေယျ... ဒီဘကျမှာ မငျးရှိနသေလို.. ဟိုဘကျမှာ ကိုယျ့အတှကျ အနာဂတျဆိုတာ ရှိနသေငျ့တယျ မဟုတျလား....
ငါတို့နှဈယောကျရဲ့ကွား တမျးတစရာ အဖွဈအပကျြတခြို့
(၀၃-၀၅-၂၀၂၀၊ ၁၆း၃၀ ညနေ)
ရှက်လွန်းလို့ ယမကာခွက်ထဲ ထိုးစိုက်ဆင်းသွားတဲ့ ရေခဲတုံးလေးခမျာ.. ပြန်ကိုပေါ်မလာရှာတော့ဘူး.. ရေခဲစက်လေးတွေ သီးထနေတဲ့ ဖန်ခွက်ငယ်လေးကတော့ သူ့အရှေ့က မိန်းမငယ်လေးရဲ့ မျက်နှာချေအနီရောင်ဆိုးဆေးတွေ အောက်က မို့မို့ဖောင်းဖောင်း ပါးအို့နီနီလေးကိုသာ စိတ်မှန်းနဲ့ ငေးမောကြည့်နေမိတယ်…
ချိုချိုလွင်လွင် အလိုက်သင့်ရီမောရင်း ခါးနောက်ကို ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့ လက်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကို ခါးလေးတွန့်ပီးသာ ရုန်းကန်နေရ.. တရံတခါကျတော့လဲ အတင်းတိုက်တွန်းနေတဲ့ မဟာပုရိသ၀ါဒီတွေကြားထဲ ပန်းပွင့်လေးတွေ ယိမ်းတိုက်သလို ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှား တေးသံသာတွေ သီကျူးပြရ… ဒီလိုနဲ့ပဲ မိန်းခလေးငယ်လေးရဲ့ ဘဝမှာ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်အနာဂတ်တွေသာ ကြီးစိုးလာနေတော့တာ ထင်ပါရဲ့..
ခွေးအအူသံတွေနဲ့ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်နေတဲ့ ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက်ကြီးမှာမှ နှင်းဆီရိုင်းလေးတွေ ဖူးပွင့်ခွင့်ရနေတာ ကံဆိုးလှချည့်ကွယ်.. မိုးလင်းက နေဝင် ကြယ်မမြင် လမမြင် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမှ ဆူးကင်းတဲ့… နွမ်းလျနေတဲ့ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေကို ဈေးကြီးအရက်နဲ့ မျောချချင်သူတွေ အများသားဆိုတော့လဲ တဖက်တလမ်းက ၀မ်းသာမိရတယ်...
တိုတောင်းလှတဲ့ ဘဝ အချိန်ခဏလေးတဲ့ .. ဟုတ်ရဲ့လား… သူများပြောတိုင်း ယောင်ခေါင်းညိတ်မိတဲ့ ပုတ်သင်ညိုလေးတွေလို ဒီမိန်းခလေးရဲ့ ကောက်တလှည့် ဖြောင့်တလှည့် ဦးခေါင်းလေးမှာ စီးကရက်မီးခိုးငွေ့တွေ ညစဉ်ညတိုင်း ဝေနေတုန်း.. ကြွေနေတုန်းပါပဲလေ..
စတိတ်ခ်ျစင်ပေါ်က တေးဂီတသံတွေနဲ့ အလိုက်သင့်ကခုန်နေပေမဲ့ မိန်းခလေးရဲ့ စိတ်အတွေးက မြို့စွန် ရွာနားက သူမရဲ့အိမ်အိုလေးဆီ မကြာခဏ ရောက်နေခဲ့တယ်.. ဒီအချိန်ဆို အမေ အိပ်မောကျနေမလား…. အမေ၊ ညီမလေးနဲ့ သူမရဲ့ အိပ်မက်တွေ အတွက် လုံခြုံရာအိမ်ကလေးတဆောင်လောက် ရချင်ယုံပါပဲ ..
ထူးထွေဆန်းပြားမှုမရှိတဲ့ လိုအင်တွေအတွက် သူမကတော့ အိပ်မက်တွေကို ချခင်းပြီး ဘ၀နဲ့ရင်းကာ ကံကြမ္မာအလိုကျ ကခဲ့ရ ဆိုခဲ့ရ ငိုခဲ့ရပြီ..
“အမေ အမေ ကြားရလား.. ဖုန်းလိုင်းက သိပ်မကြည်ဘူး အမေ..”
ဖုန်းလိုင်းမကောင်းလို့ အသံတွေကို ပြတ်တောင်းတောင်း ကြားနေရပေမဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမေ့အသံဟာ သူမကို တဒင်္ဂအတွက်တော့ အားအင်တွေ ရစေတယ်..
‘အမေ အဆင်ပြေရဲ့လား.. နေကောင်းရဲ့လား.. ညီမလေးတွေရော… ဒီမှာအဆင်ပြေတယ် အမေရဲ့.. မနက်ဖြန်လောက်ဆို သမီး အိမ်ကို ငွေလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်..’
တယ်လီဖုန်းခွက်ကို စင်ပေါ် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီး ဒေါက်ဖိနပ်သံနဲ့ တခွပ်ခွပ်နဲ့ ပြန်လှည့်ထွက်သွားတဲ့ ပန်းရိုင်းအနီရောင်လေးကို တယ်လီဖုန်းလေးက အလိုက်သင့်ငေးမောလျက်သား ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်…
ကံကြမ္မာ ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ ပန်းရိုင်းကလေးတွေဘ၀ သရုပ်ပြခဲ့ရ…
ပြည့်စုံ (11း11 am, September 13, 2017)
at 9:48 PM Labels: ရင်ဖွင့်ရာ အတွေးပုံရိပ်
ရေများတဲ့နေရာမှာ မိုးကြီးတဲ့ အရပ်မှာမှ
မပါပြန်တော့လည်း ဘဝဟာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စနဲ့ ရှင်သန်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရ....
လမ်းချင်းတူတုန်း လူချင်းဆုံအောင် ကြိုးစား
အချစ်တွေကို ဒီလိုနဲ့ပဲ မျှားကြည့်ရအောင်.....
at 10:03 PM Labels: ကဗျာ၊ သတိရခြင်းများ
သီပေါမြို့ကို အလည်တစ်ခေါက် ကိုယ်ရောက်ခဲ့တယ်…
နံဘေးမှာ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့ ဒုဌ၀တီမြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်မှာတော့ သီပေါမြို့လေးဆီ ကိုယ်တို့ ရောက်ခဲ့တယ်..
သီပေါမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ဘုရားတွေဆီ အဖူးမြော်ရောက်ခဲ့တယ်.. ကိုးသိန်းကိုးသန်းရှင် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ သမိုင်းဝင် ဘော်ကြိုဘုရားကြီး၊ နောက် လွယ်မုတ်တောင်မှာရှိတဲ့ စော်ဘွားကြီး ဆာစ၀်ချယ်ရဲ့ ဂူသချိုင်္င်းအပြင် ကိုရင်လေးရေတံခွန်၊ နောက် အဖ ကိုးမြို့ရှင်နဲ့ အမေ ပုလဲယဉ်မယ်တော်တို့ရဲ့ အကြီးဆုံး နတ်နန်းဆီကိုလည်း ရောက်ခဲ့တယ်..
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်တို့ ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာကတော့ သီပေါမြို့ရဲ့ နောက်ဆုံးစော်ဘွားမျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ သီပေါဟော်နန်းပါပဲ..
ဒီဟော်နန်းမှာ သီပေါမြို့ရဲ့ နောက်ဆုံး စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နဲ့ ဇနီး သြစတြီးယားသူ မဟာဒေ၀ီ စ၀်သုစန္ဒီတို့ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်..
ဟော်နန်းက ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတယ်.. မိုးမှုန်မှုန်လေးတွေ တဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့ကြားက ဟော်နန်းဆီ ရောက်ဖို့ ကိုယ်တို့တွေ ချဉ်းကပ်လာကြတဲ့အခါ ပိတ်ထားတဲ့ သံပန်းတံခါးကြီးပဲ ရှိပါတယ်.. အရင်တုန်းကဆို ဒီနေရာတ၀ိုက်ဟာ အိမ်ဝင်းထဲကို ၀င်ခွင့်မပြောနဲ့ .. ဖြတ်သန်းသွားလို့ မရခဲ့ဘူး.. အစောင့်အကြပ်တွေ အထပ်ထပ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတချို့ ရှိခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်…
အခုတော့ ဒီနေရာမှာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ အထွတ်အမြတ် နေရာတစ်ခုကဲ့သို့ ယခုအထိ အရိုအသေပေး စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။။
ဒီနေရာဟာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထဲကလိုပဲ ပုံပြင်ဆန်လွန်းတယ်.. စစ်အုပ်ချုပ်ရေး လူတန်းစားတွေကြောင့်ပဲ ဒီအိမ်တော်ရဲ့ သမိုင်းဟာ ပိုပြီး ပီပြင် ထင်ရှားလာတယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ…
အခုအခါမှာတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေနဲ့ ကိုယ်တို့လို ဌာနေခရီးသွားတွေ ၀င်ရောက်လည်ပတ်ခွင့် ရခဲ့.. ကြည့်ရှု လေ့လာခွင့်ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်..
လိုက်ပို့ပေးတဲ့ သီပေါမြို့ခံ ဆရာမရဲ့ အဖေနဲ့အမေကတော့ ဒီနေရာဟာ မဖြစ်မနေ သွားရောက် လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာလို့ ပြောပြီး သူတို့ပဲ ဦးဆောင်ကာ ကိုယ်တွေကို ခေါ်လာတာ ဖြစ်တယ်..
ဧက တော်တော်များများ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ထီးထီးကြီး ရပ်တည်နေတဲ့ ဟော်နန်းဟာ အခုအချိန်အထိတောင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေတုန်းပါပဲ။။
သံပန်းတံခါးမှာ သော့ခလောက်အကြီးကြီး တစ်ခု ခတ်ထားတယ်.. အတွင်းထဲကို လှမ်းအော်ခေါ်နိုင်ပေမဲ့ ဒေါ်ဒေါ်က ကားပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို သံပန်းနဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြားက နေရာလေးကနေ ကပ်ပြီး ခြံဝင်းထဲကို ၀င်ခိုင်းလိုက်ပြီး အထဲက လူတွေကို ဟော်နန်းထဲကို ၀င်ရောက်လေ့လာခွင့်ရချင်နေတဲ့ လူတွေ အိမ်ဝန်းပြင်မှာ ရပ်နေတယ်လို့ အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပါတယ်..
ခဏနေတော့ အိမ်ဝန်းထဲကနေ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်.. သူမက ရှမ်းဘာသာ စကားနဲ့ စကားလှမ်းပြောပြီးနောက်မှာမှ သော့ခလောက်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်.. တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ ရောက်တဲ့အချိန်ကလည်း ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်လောက်ဆိုတော့ ဟော်နန်းပိတ်ချိန် ဖြစ်နေပြီ.. ဒါပေမဲ့ ဒေသခံဒေါ်ဒေါ်ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ကျွန်မတို့ ဟော်နန်းထဲ ၀င်ခွင့် ရလိုက်တယ်..
အမျိုးသမီးကြီးက ကျွန်မတို့ကို ဘယ်ကနေ လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေလည်းလို့ မေးတယ်.. ကျွန်မတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ နေရင်းအရပ်တွေကို ပြောပြပြီးနောက်မှာတော့ ခြံဝန်းထဲကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုပါဦးလို့ အရင် ပြောပါတယ်..
ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆောင် ရှိတယ်..ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီး ပြင်ဆင်မွမ်းမံနေဆဲ လို့ ပြောတဲ့ ဘုရားကျောင်းဆောင် နံဘေးမှာ ရိုးရာနတ်စင်တွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်..
သီပေါစော်ဘွားက သူ့ရဲ့ မဟာဒေ၀ီ သြစတြီးယားနိုင်ငံသူအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ တင်းနစ်ကွင်း၊ ရေကူးကန်.. ဒါတွေဆီလည်း ရောက်ခဲ့တယ်.. ထိုခေတ်အခါဆီကတော့ ဒီတင်းနစ်ကွင်း တွေ၊ ရေကူးကန်တွေဟာ ခေတ်စားခဲ့မှာပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အရာအားလုံးဟာ တိတ်ဆိတ်လို့ ခြောက်ကပ်လို့….
မိုးလေးက တဖွဲဖွဲရွာနေတုန်းဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မှိုင်းလို့ပြာလို့မှုန်လို့… ပတ်ပတ်လည် ၀န်းရံထားတဲ့ ရှမ်းတောင်တန်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ ဟိုယခင် အခေတ်အခါက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုရဲ့ ပြယုဂ်ကို ဖမ်းယူပြီး ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိတယ်..
ခေတ်အခါ စည်ပင်စဉ်က ဒီနေရာဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ကြည်နူး ပျော်မြူးနေကြမယ့် ချစ်ခင်သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တွေးမိပြီး ကိုယ့်ရင်ဟာလည်း အတိုင်းအဆမရှိ ၀မ်းနည်းလာမိတယ်…
ဟော်နန်းထဲကို အ၀င်မှာတော့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို အစီအရီ ခင်းကျင်းပြသထားတယ်.. ဟော်နန်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ သီပေါစော်ဘွားအနွယ် အမျိုးသမီးကြီးက ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ သီပေါဟော်နန်းအကြောင်း၊ နောက် သီပေါစော်ဘွားနဲ့ သူ့ရဲ့ မဟာဒေ၀ီ အကြောင်းတွေကို ဓာတ်ပုံတွေ စာအုပ်တွေကနေ တစ်ဆင့် ရှင်းပြနေတယ်..
သူမရဲ့ အသံက ချိုအေးတယ်.. နားထောင်ကောင်းရုံသပ်သပ်ထက် ဓာတ်ပုံတွေထဲက ရုပ်ပုံလွှာတွေကြောင့် ဒီအမှန်တရားဟာ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်မှန်း ပိုသိလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာ ပုံရိပ်တွေထင်လာတယ်…
အချိန်တန်လို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ကြချိန်မှာတော့ ခြံဝန်းတံခါးဝမှာ ရပ်တန့်ထားခဲ့တဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ကားဆီ မှုန်ဖွဖွ ရွာသွန်းနေဆဲ မိုးစက်များအကြားမှာ လမ်းလျှောက်လာရင်း အိမ်တော်ဝင်းကြီးဆီ လည်ပြန်ငေးရီမိတဲ့အခါ မှာတော့..လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသယောင် ဟော်နန်းကြီးဟာ ပြာမှိုင်းမှုန်ရီနေတဲ့ မိုးရေစက်များကြား ထီးထီးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ ကျန်ရစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်..
(04-12-2014 < 4:12 pm)
ဘယ်သူက ထင်မှာလဲ၊ တောင်ပူစာ ခြုံကြားမှာ မြို့နန်းတည်ရလိမ့်မယ်လို့ ရှေးဆယ်စုနှစ်တွေဆီက အိပ်မက်ပင် မက်ဖူးမယ် မထင်။ သို့ပေမဲ့ အခုတော့ ခြုံကြားက ဘုံဖျားတွေ ပေါ်လာပြီး နတ်နန်းတွေ အစီအရီပေါက်သလို မြို့တော်သစ် တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာတယ် ပြောရမှာပါပဲ။
မြို့အလျားက ကျယ်ဝန်းတယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြေပြင်ကို မြင်ရသလောက် မြို့နယ်ခွဲလေးတွေကို စိပ်ပိုင်းထားတာ ညီညာတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေကို နေရာချပေးထားတဲ့ အကွက်တွေမှာ သွပ်မိုးရောင် ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေ မြင်ရတယ်၊ တချို့နေရာတွေကတော့ လွင်တီးခေါင်နီးနီးပါပဲ။
နေပြည်တော် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ကြီးဆီ ရောက်ဖို့ လေယာဉ်ပြေးလမ်းက အနည်းငယ်ရှည်တယ်၊ လေယာဉ်ဘီးလုံးတွေ ရပ်တန့်သွားပြီး ခဏနေတော့ လေဆိပ်နားနေဆောင်ဆီ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ကားတွေ ရောက်လာတယ်၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်နဲ့ တခြားစီပဲ၊ ကွင်းဘေးမှာ လေယာဉ် နှစ်စီး ရပ်ထားတာ တွေ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ကြီးဆီမှာ လေယာဉ်တွေ မရှိတော့ လေဆိပ်က ထီးတည်းရပ်နေတာ သူ့အစား ကိုယ့်မှာ အားတွေနာလို့။။။
ဒီလိုနဲ့ လေဆိပ်ကို ရောက်တယ်၊ ကိုယ့်မှာက လက်ဆွဲအိတ်ငယ်ပဲ ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရွေ့လျားခါးပတ်ပြားတွေကတော့ အထုပ် ပါပါ မပါပါ လည်နေတယ်၊ လက်ဆွဲသေတ္တာ နှစ်လုံး သုံးလုံးလောက် ထွက်လာတယ် တွေ့တယ်။။
လေဆိပ်အပြင်ကို ရောက်အောင် တော်တော်လေး လမ်းလျှောက်ရတယ်၊ တွေ့ရသလောက်လဲ လေယာဉ်မှာ ပါတဲ့ ဧည့်သည်လောက်နဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပဲ လေဆိပ်ထဲမှာ ရှိနေတယ်၊ လေဆိပ်တစ်ခုလုံးကလဲ တိတ်ဆိတ်လို့… အဲကွန်းအအေးဓါတ်ကြောင့်လား မသိဘူး စိမ့်နေအောင် အေးနေတယ်။ အပြင်မှာတော့ ကျောကော့အောင် ပူလှတော့မယ်။။
အပြင်မှာ လူနည်းနည်း ကျဲကျဲ ရပ်နေတယ်၊ ကိုယ့်နာမည်ကို ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုမြင်တော့ လာကြိုတဲ့ ကားသမားကို ပြုံးပြလိုက်တယ်။ တက္ကစီခက တစ်နေ့လုံး အသုံးပြုမယ်ဆို ကျပ်ငါးသောင်း ပေးရမယ်လို့ ပြောတယ်၊ ကားသမားကတော့ အမြဲငှားနေကျမို့ ခရီးစဉ်လိုက်ပဲ ပိုက်ဆံကို ပိုင်းယူပါ့မယ်လို့ ပြောတယ်၊ ရပါတယ် ဘယ်လိုယူယူပေါ့. ကိုယ်သွားမယ့် ခရီး သွားလမ်းသာပြီး လာလမ်း ဖြောင့်ဖို့ပဲလို့ သဘောရတယ်။
လေဆိပ်က လယ်ဝေးမှာ၊ မြို့ကြီးက နေပြည်တော် ကြပ်ကုန်းမှာ.. ကီလို ၁၀၀ လောက် မောင်းတာတောင် မိနစ် သုံးဆယ်လောက် မောင်းလိုက်ရတယ်။ ပေးပျော်ပါတယ် ၂၅၀၀၀။
မြို့ကို ပထမဆုံး အမြင်မှာတင် အပူရောင်ဟပ်တယ်…
တံလျှပ်တွေ တဖွေးဖွေး ထနေတဲ့ လမ်းမကျယ်ကြီးတွေမှာ ကားတစ်စီးမှ မတွေ့ရဘူး၊ လမ်းဘေးတလျှောက် ပန်းပင်တွေ ရှိတယ်၊ အမှိုက်တွေတော့ မရှိဘူး၊ လေးလမ်းသွား လမ်းမကြီးတွေကို နှစ်ပိုင်းစီ ပိုင်းထားတယ်၊ အတွင်းလိုင်း နှစ်လုံးဆီကို အပေါ်ကနေ ကတ္တရာ ပါးပါး ပုတ်ထားတာ တွေ့တယ်၊ အဲ့ဒီကတ္တရာပုတ်ထားတဲ့ လမ်းတွေကို လမ်းလယ်ခေါင်မှာ အကာလေးတွေ လုပ်ပေးထားတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ မေးတော့ .. ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကုန်ကားကြီးတွေက ဘေးနှစ်လိုင်း ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်ကပဲ မောင်းရတယ်လို့ တက္ကစီသမားက ပြန်ဖြေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လစ်ရင် လစ်သလို ကတ္တရာဖြူးထားတဲ့ လမ်းပေါ် တက်မောင်းကြတာပဲ။ သူသူကိုယ်ကိုယ် လမ်းကောင်းကပဲ မောင်းချင်ကြတာကိုး အစ်မတဲ့။
ဟုတ်မှာပဲ… ပြောရင်းနဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ကတ္တရာလမ်းပေါ် တိတ်တိတ်လေး ခိုးတက်လာတာ မြင်ရတယ်။ ခဏနေရင်တော့ သူ လမ်းဘေးဆင်းရမှာပဲ၊ အရှေ့မှာ ဆပ်ပလိုင်းချက်တွေ ရှိတယ်တဲ့။
နေပူကြောင်တောင်ကြီးမှာ မော်တော်ပီကယ် သုံးယောက် ဆိုင်ကယ်လေးတွေရပ်ပြီး နေပူဆာလှုံနေကြတယ်၊ ဘေးနားမှာလည်း ဦးထုပ်မဆောင်းလို့ ဆိုပြီး ဖမ်းထားတဲ့ ဆိုင်ကယ် သုံးလေးစီး တွေ့ရတယ်။
လမ်းဘေးဝဲယာမှာ ဟိုတယ်တွေ အများကြီးတွေ့တယ်၊ လူနေအိမ်တွေ မရှိဘဲ ဟိုတယ်ကြီးငယ် ဆောက်လက်စတွေ အများကြီးတွေ့တယ်။
တည်းမယ့် ဟိုတယ်ကို ရောက်တယ်၊ ဟိုတယ်ဝင်းက အကျယ်ကြီးပဲ၊ ဟိုတယ်အိမ်လေးတွေကလည်း တမျှော်တခေါ် ဝေးလို့၊ ရီဆက်ရှင်းက ကောင်မလေးက check out ပြန်ထွက်ရမယ့်အချိန်ကို သေသေချာချာ ရှင်းပြနေသေးတယ်။
ခဏနေတော့ ဂေါ့ဖ်ကွင်းတွေမှာ မောင်းတဲ့ ကားသေးသေးလေး ရောက်လာပြီး ကိုယ့်ကိုတင်ပြီး တောင်ကုန်းလေးတွေလို လျှောက်လမ်းလေး လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ဝင်းထဲက အိမ်တစ်လုံးဆီ ခေါ်သွားတယ်၊ ဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာ ရေကူးကန်ရှိတယ်၊ နောက် ကျန်းမာရေးစင်တာ တစ်ခုတွေ့တယ်။ သစ်ပင်အုပ်အုပ်လေးတွေ တွေ့တယ်၊ ပွဲတစ်ခုရှိလို့လား မသိဘူး၊ စင်တွေနဲ့ ခုံတွေ ပြင်နေတာလဲ တွေ့တယ်။
နေပြည်တော်မှာ အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ ညွှန်းကြတယ်၊ အဟုတ်ပဲ wi fi က ဆစ်ဂနယ်တုံး အကုန်မိနေတယ်၊ နှမြောစရာ ကောင်းတာက ကိုယ်က ခဏလေး လာတယ်ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာလည်း မသယ်ခဲ့သလို၊ အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့ ဖုန်းကလည်း ဘတ္တရီသွင်းမယ့်ကြိုး မေ့ခဲ့တယ်၊ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ။။
ရခဲလှတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ကြုံတုန်းတောင် မဒေါင်းနိုင်တော့တာ… ဒီဘ၀ ကျွတ်ဖို့ခဲလှတာ ဆန်းမယ် မထင်တော့။။။
ခဏနေတော့ လုပ်စရာရှိတာ၊ ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဖို့ အပြင်ကို ပြန်ထွက်ရတယ်၊ ဒါလည်း ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်၊ နေပြည်တော်မှာ နေ့စာ ညစာ ဘယ်လိုစားရမလဲ မေးတော့ ကားသမားက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ညွှန်းတယ်၊ ရွှေပလ္လင်တဲ့။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က အထဲမှာ လူတွေစည်တယ်၊ စားလို့ကောင်းတယ်၊ ဈေးနှုန်းသင့်တယ်၊ အကြိုက်ဆုံးက လက်ဘက်ရည်ပဲ။
လက်ဘက်ရည်သောက်တယ်၊ မုန့်စားတယ်၊ နေ့လယ်စာ ပါဆယ်ဆွဲခဲ့တယ်၊ ရတဲ့ ပါဒီယမ်က ဟိုတယ်စာ စားဖို့ လောက်မယ် မထင်ဘူးလေ။ လက်ဘက်ရည် သောက်နေတုန်း ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ဟားဟားဟီးဟီး ရီဖြစ်တယ်။ လက်ဘက်ရည် ကောင်းကောင်း သောက်ရလို့လား မသိဘူး လူက အရသာပြည့်နေတယ်။
နေ့လယ်ခင်း ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး၊ ဘယ်ကို သွားလည်ရမလဲ မေးတော့၊ နယ်ခံ ကားသမားက အားပေးတယ်၊ ဟိုတယ်မှာပဲ နားနေပါ အစ်မရယ်။ နေက သိပ်ပြင်းလွန်းတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်မှာ တစ်နေကုန် အိပ်တယ်၊ အဲကွန်းအေးအေးနဲ့ တီဗီကို ဖွင့်ပြီး ချန်နယ်လ်တွေ အကုန်လျှောက်နှိပ်တယ်၊ တရေးတမော အခါခါ အိပ်တယ်။ တစ်နေ့လုံး ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ပျင်းရိစွာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
မနက်လင်းတော့ ဟိုတယ်က နံနက်စာ ကျွေးတယ်၊ စားကောင်းပါတယ်၊ ဧည့်သည်ထက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေက ပိုများနေတော့ ၀န်ဆောင်မှုက တအားကောင်းနေတယ်။ ကိုယ်က ခေါင်း ဘယ်ညာ သိပ်မလှည့်ရဲဘူး၊ ၀န်ထမ်းတွေက အနားကို ရောက်လာပြီး လိုတာ လုပ်ပေးဖို့ ပြင်နေတယ်။ ရပြီ ရပြီ။ ကိုယ်တွေက ဦးညွှတ် ခရီးဦးကြိုပြုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ သိပ်အသားမကျသေးတော့ သူတို့ ဦးညွှတ်ပြီး အရိုအသေပေးတိုင်း ကိုယ့်မှာ ခါးတွေ ဘာတွေကုန်းပြီး အားတုန့်အားနာတွေ ဖြစ်လို့။ ကိုယ်က တစ်ပြန် ကျေးဇူးတွေ ပြန်တင်နေမိသေးတယ်။
ပွဲကလည်း မြန်လိုက်တာ၊ ၉ နာရီစတဲ့ ပွဲက ၁၀ နာရီမှာ ပြီးတယ်၊ စားတယ် သောက်တယ်၊ လိုအပ်သည်များ မှာစားကြပြန်တယ်၊ ကိုယ်တွေက တစ်ခါတည်း လေဆိပ်တန်းဆင်းရမယ် ဆိုပြီး ဟိုတယ်ကနေ အထုပ်တွေ ယူခဲ့ပြီ၊ လေယာဉ်အချိန်က ညနေ ၄ နာရီ၊ ကျန် ကြားထဲက နာရီတွေ အတွက် ငုတ်တုတ်မေ့ကြစို့။
ဒီလိုနဲ့ နေပြည်တော် လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ကားလျှောက်မောင်းကြတယ်၊ တနင်္လာနေ့ မို့လို့လား မသိဘူး၊ တစ်ခုသော ပန်းအ၀ိုင်းပတ်နေရာမှာ ကားနည်းနည်း ပိတ်နေတယ်၊ အံ့တွေကို သြလို့။ ရန်ကုန်အတိုင်းပါပဲလား။ ခဏနေတော့ ရှင်းသွားတယ်၊ ကားတစ်စီးက ကန့်လန့်ကြီး ပျက်နေလို့ပါတဲ့။ ကားသမားက ပြောတော့ ကိုယ်တွေမှာ အူတွေကို နာလို့ ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော။
သပြေကုန်းဈေးကို သွားတယ်၊ ကိတ်မုန့်နဲ့ မျှစ်ချဉ် နည်းနည်းပါးပါး ၀ယ်တယ်၊ နောက်တော့ YKKO ဆိုင်မှာ သွားထိုင်ကြတယ်၊ စားတယ် သောက်တယ်၊ ညောင်းအောင် ထိုင်တာတောင် တစ်နာရီထက် ပိုမထိုင်ချင်ဘူး၊ ဒါနဲ့ ဘယ်နေရာကို ထပ်သွားဖို့ရှိသေးလဲ ကားသမားကို ထပ်မေးတယ်။ လေဆိပ်ကိုသာ သွားနေတဲ့။ လေဆိပ်မှာ အဲကွန်းရှိတော့ အေးပြီး နေလို့ကောင်းတယ်တဲ့။ ဟုတ်မှာပဲ အလာတုန်းက ကိုယ်သိသွားခဲ့တာဆိုတော့ လေဆိပ်ဆီ ချီတက်ကြတယ်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၀န်းကျင်လောက် လေဆိပ်ကို ရောက်တယ်၊ Departure ဂိတ်ကြီးက ကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုက်တာ၊ လူကသာ မရှိတာ၊ လေဆိပ်တစ်ခုလုံးက ပြောင်လို့ တောက်လို့။ ရှင်းလို့ သန့်လို့။ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းကို သွားမေးတော့ ၂ နာရီမှ check in ကောင်တာ ဖွင့်မယ်တဲ့။ ဟုတ်ပြီလေ စောင့်ကြဦးစို့။
နေရာအနှံ့ ရဲတွေချည်းပဲ၊ ဒုသမ္မတ ခရီးစဉ်ရှိလို့တဲ့၊ ခဏနေရင် ရဲကြီးကြီး နှစ်ယောက်က ရဲငပိန်လေးတွေကို တန်းစီခိုင်းလိုက် သြ၀ါဒခြွေလိုက်၊ ခဏနေတော့ ကိုယ်တို့ဘေးနားက ထိုင်ခုံတွေပေါ် ရဲတွေ ရောက်လာပြီး ခါးကြားက ဖုန်းကိုယ်စီထုတ်ကာ ပွတ်နေကြတော့တယ်။
၁ နာရီဝန်းကျင်ရှိလာတော့ ထိုင်ရတာ ဖင်ပူလာတယ်၊ ရေလဲ သောက်ချင်တယ်၊ ကော်ဖီလေးများ သောက်ရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲ၊ လေဆိပ်အကြီးကြီးထဲမှာ မေခလာ ကော်ဖီဆိုင်လေးကို သွားတွေ့တယ်၊ ကားအစုတ်လေးနဲ့ ဒက်ကရေးရှင်း ခင်းထားပြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက် ထိုင်နေတယ်။
ကောင်မလေးက ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ပုံလေးနဲ့ ကိုယ့်ကို မတ်တပ်ထရပ်ရင်း ပြုံးပြတယ်။ ကိုယ်လဲ ထပ်မေးတာပေါ့။
“ရှိတော့ ရှိတယ် အစ်မ” [တွန့်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ ဖြေပုံက]
“မအေးလို့လား ညီမလေး၊ မအေးလည်း ရတယ်”
ကိုယ့်အသံလည်း နည်းနည်းတုန်သွားတယ်၊ နောက်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ဖြည်လိုက်တယ်၊ သဲကန္တာရထဲမှာ ဆိုပါစို့၊ ရေတစ်စက်လောက် သောက်စရာမရှိလို့ သေသွားမယ်ဆိုရင် သေနိုင်တာပဲ။ ငါ့မှာလည်း ၀ယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ ရှိသေးတာပဲ။
အပြင်မှာဆို တစ်ဘူးကို နှစ်ရာပေးရတယ်၊ တကယ်တော့ သူ့ရဲ့ အရင်းက တစ်ရာလောက်ပဲ ရှိတာပါ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ့်အစ်ကို အသုဘတုန်းက ရေဘူးကမ်းတော့ သိနေတယ်၊ တစ်ဘူးမှ ၁၀၀ တောင် မပြည့်ဘူးရယ်။
တစ်ထောင့်နှစ်ရာကျပ် ပေးလိုက်ရတယ်၊ ရေကလည်း ချိုလိုက်တာ ဈေးကြီးလို့လား မသိဘူး။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့။
လေဆိပ်က တအားကြီးတယ်၊ တအားလည်း သပ်ရပ်တယ်၊ တအား သန့်ရှင်းတယ်၊ သန့်ရှင်းမှာပေါ့၊ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမလေးတွေက ဘာမှမရှိတဲ့ နေရာတွေမှာတောင် အထပ်ထပ် ပွတ်တိုက်နေကြတယ်၊ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က လေဆိပ်တစ်ခုလုံးကို မတ်တပ်ရပ်တိုက်တဲ့ အ၀တ်နဲ့ ညီညီညာညာ လိုက်ပွတ်နေကြတယ်။
လေဆိပ်ဝင်းတစ်ခုလုံးကို အဲကွန်းတွေ အေးနေအောင် လွှတ်ထားတာရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်မိတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကိုများ သုံးနေတာလဲ။ လိုအပ်တဲ့ နေရာရော ဟုတ်ရဲ့လား။
၂း၃၀ နာရီ။ ကောင်တာမှာ check in ၀င်တယ်။ ပြီးတော့ X-ray ဖြတ်တယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ထိုင်နေတယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ထောင့်နှစ်ရာတန် ရေသန့်ဘူးလေးကို ကိုင်ပြီး လွှင့်မပစ်ရက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
လွှင့်ပစ်လိုက်ရမလားဟင်လို့ မေးတော့ ကောင်လေးက ခေါင်းကုတ်တယ်၊ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ယူသွား အစ်မတဲ့။ ပျော်လိုက်တာ ဆိုတာ။
ဂိတ်ပေါက်ဝ အားလုံးပေါင်း ၁၁ ခု ရှိတယ်၊ လေယာဉ်က တစ်စင်းပဲ ဆိုက်မှာကွယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်တွေကို ဂိတ် ၁၀ မှာ သွားစောင့်ခိုင်းတယ်။ ဂိတ်နံပါတ် ၁၀ က အောက်ကို စက်လှေခါးနဲ့ ဆင်းရတယ်၊ စက်လှေခါးကြီးက စီးမယ့်လူ မရှိလည်း သူ့တာဝန်ကို သူကျေအောင် အထက် အောက်လည်နေလေရဲ့။
နောက်ထပ် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တိတိ အဲ့ဒီလေဆိပ်မှာ ထိုင်စောင့်ပြီး သကာလ လေယာဉ်ရောက် လာတယ်၊ ရောက်လာတယ် ဆိုတာက လေယာဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည် ပါမလာလို့လေ။
ဒီလောက် သစ်လွင်တဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်ကို မစီးဖူးဘူး။ မဆိုးဘူး ဒါပေမဲ့ တိမ်ထူလို့လား မသိဘူး၊ လေယာဉ်က နည်းနည်းခါနေတယ်၊ အမြင့်ပေ ၂၀၀၀၀ ကျော်တော့ တော်တော်ငြိမ်သွားတယ်၊ အန္တရာယ်ကင်း အချက်ပေးသံ ပေါ်လာတော့ လေယာဉ်မယ်လေးက မုန့်နဲ့ ကော်ဖီလိုက်တိုက်တယ်။
ဘ၀မှာ သောက်ဖူးတဲ့ ကော်ဖီတွေထဲ ဒီကော်ဖီက အရသာရှိလိုက်တာ၊ တစ်ခွက်ထဲနဲ့ မ၀ဘူး။
တိမ်တွေက လှလိုက်တာ၊ ကိုယ်က တိမ်တွေ အပေါ်ကို ရောက်နေတယ်၊ တိမ်တွေကလည်း အောက်မှာ ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်လို့၊ လှချက်။
ရန်ကုန်လေဆိပ် ဆိုက်ဆိုက်ချင်း လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်းမှာပဲ အပူရှိန်အဟပ်ခံလိုက်ရတယ်။ အေးစိမ့်နေတဲ့ နေပြည်တော်လေဆိပ်ရဲ့ အအေးဓါတ်ကြောင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ အပူရှပ်သွားတယ်။
အပူ အအေး မညီမျှမှုက ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲဆို နေပြည်တော်ရွှေမြို့တော်ကြီးကနေ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးဆီ ပြန်ရောက်ပြီး နာရီပိုင်းမကြာဘူး အဖျားတွေ တက်ပြီး ရှော့ရသွားတာ၊ အကြောဆေး ထိုးလိုက်ရတဲ့အပြင် နှစ်ရက်လောက် အိမ်မှာ အနားယူလိုက်ရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဖျားသွားတာလဲ လို့ မိသားစုက နားမလည်သလို မေးတော့ ကိုယ်လည်း နားမလည်ပေမဲ့ မကြုံစဖူးတွေ မမြင်စဖူးတွေ တွေ့ကြုံဆုံလိုက်ရလို့ လန့်ဖျား ဖျားသွားတယ် ထင်တယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်တယ်။
နို့ ကိုယ့်မယ် မာမာချာချာကြီးက ဖျားယူလိုက်ရတာကိုး။
3း16 pm< 1 April 2014>
နံနက်ခင်းကို ပုံဖော်နိုင်သည့် တေးသံအများစုကြားမှာ သူမကို အိပ်ရာကနေ နိုးထဖို့ နှိုးဆော်သည့် အသံဟာ နှိုးစက်သံ ဖြစ်နေခြင်းကိုက သူမရဲ့ အသက်ဝင် ရှင်သန်မှုကို တနည်းတဖုံအားဖြင့် အသိပေးနေသလိုပင်။
နံနက်ခင်း ၆ နာရီဆို သူမအတွက် နွေးထွေးတဲ့အိပ်ရာကနေ ထွက်ခွာဖို့ အချက်ပေးသံ မြည်လာမည်။ ရေမိုးချိုး သနပ်ခါးလိမ်းပြီးသည်အထိ သူမရဲ့ စိတ်အစဉ်က အေးငြိမ်းနေတုန်းပင်။
မေတ္တာသုတ်တော်ကို ရွတ်ဆိုပွားများခြင်းဟာ ၃၁ ဘုံသား သတ္တ၀ါအများကို မေတ္တာပို့လိုခြင်းထက် မာန်မာနအစွဲကြီးလှတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းအေးအောင် တနည်းတဖုံအားဖြင့် အားကိုးအားထားပြုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
နံနက် ၇ နာရီဟာ သူမအတွက် အိမ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာပြီး အလုပ်ခွင်ကို ဦးတည်သွားနေသည့် လမ်းကြောင်းပေါ် ရှေးရှူနေခဲ့ပြီ။
ကတ္တရာပါးပါး ခင်းထားသည့် လမ်းကလေးကနေ အုတ်နီခဲကျိုးများ မညီမညာ ခင်းကျင်းထားသည့် လမ်းကွေ့ချိုးလေး တခုဆီ ခြေလှမ်းတွေကို ဖဲ့ဆင်းလိုက်သည်။ ခြေလှမ်း ၂၀ နီးပါးသာ လှမ်းလျှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ဒီလမ်းချိုးကွေ့လေးဟာ သူမအတွက်တော့ နှစ်သက်စရာပင်။
အုတ်နီခဲကျိုးများကြားမှာ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေသည့် မြက်ပင် ခယိုးခယိုင်လေးများဆီက နူးညံ့စွတ်စိုမှု အထိအတွေ့ကို ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ခံစားရသည်။ အေးမြလတ်ဆတ်သည့် လေညင်းရဲ့ရနံ့က သူမရဲ့ မျက်နှာကို တိုးထိသွားပြီးသည့်နောက် အဲ့ဒီ လမ်းချိုးလေးအတိုင်း ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။
ဆောင်းဦးနံနက်ခင်း အများစုဟာ အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ စိမ်းလန်းစွတ်စိုမှုကို အပြည့်အ၀ ခံစားစေသည်ဆိုရင် ငြင်းစရာ မရှိလောက်အောင်ကို သူမက ထောက်ခံချင်သည်။
ညဉ့်ဦးပိုင်းဆီက ကျဆင်းထားသည့် မြူမှုန်များနှင့် နှင်းငွေ့များ၏ အေးမြမှုကို တညလုံး ငြိမ်စုပ်ထားကြသည့် သစ်ပင်များဆီမှ သန့်ရှင်းသည့် ရနံ့ကို သူမ သတိထားမိသည်။
လမ်းတောက်လျှောက် အိမ်များဆီမှ မနက်ခင်းတိုင်း ကြားရတတ်သည့် ပရိတ်တရားသံ၊ မေတ္တာပို့ အမျှပေးဝေသံနှင့်အတူ ဖန်ခွက်တချို့ ခလုတ်တိုက်သံများကို နားစွင့်နေရင်း ခဏနေရင်တော့ သူမရဲ့ နောက်နားဆီကနေ သတင်းစာပို့သမားကြီး၏ စက်ဘီးဘဲလ်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။
ဒီလမ်းလေးကို လွန်သွားပြီးရင် နောက်ထပ် ကတ္တရာ မရှိတော့သလောက် ပါးရှားသွားသည့် လူအများ ဖြတ်သန်းသွားရာ ရပ်ကွက် အလယ်ခေါင်တည့်တည့် လမ်းမကြီးပေါ် သူမ ရောက်တော့မည်။
သူမရဲ့ အိမ်ကနေ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် အချိန် ၁၅ မိနစ်စာ လမ်းလျှောက်ဖို့ လိုအပ်သည်။ သူမအတွက်ကတော့ ဒီလမ်းတွေဟာ အမြဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိနေကျပင်။
လမ်းမကြီးတလျှောက် ရပ်ကွက်ဟိုဘက်ထိပ်ဆီက မနက်ခင်းဈေးလေးသို့ ဦးတည်သွားနေကြသည့် အိမ်ရှင်မ အများစုကို တွေ့ရပြီး သူတို့နှင့် ဦးတည်ဘက်ချင်း မတူသည့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ဆီကို လှမ်းလျှောက်သွားနေသည့် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်မည့် သူ အများစု၏ ဒီဇိုင်းအစုံစုံကိုလည်း အမြဲတစေ ပုံမှန်တွေ့ရသည်။
အတွေးနဲ့တင် ကြည်နူးနေသည့် နံနက်ခင်း အာရုံဝင်စားမှုများကို လက်စသတ်လိုက်ပြီး ခြေလှမ်းကို အရှိန်စမြှင့်လိုက်သည်။ လမ်းသွယ်လေးဆီကနေ လမ်းမကြီးဆီ ခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်သည်နှင့် ဥဒဟို သွားလာနေသည့် ကားမျိုးစုံ၏ အိပ်ဇောပိုက်တွေဆီက ထွက်လာသည့် မီးခိုးနံ့များနှင့်အတူ ရှင်သန်လိုမှု ဇောအဟုန်၏ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံစားရတော့မည်။
ခရီးသည်တင် ဘီအမ်ကားတစင်း အဝေးဆီကနေ ဒုန်းစိုင်း မောင်းလာသည်ကို မြင်လိုက်ရပြီး အဲ့ဒီ ဘီအမ်ကား မှတ်တိုင်ကို မ၀င်မှီကတင် ကားပေါ်ကနေ စပယ်ယာတယောက် လေထဲကနေ ၀ဲပျံလာပြီး ကားအောက်ကို ခုန်ချလိုက်သည်။
" လိုက်မလား လိုက်မလား ဆူးလေကို ဆူးလေကို ... သွက်သွက်လေးတက် သွက်သွက်လေးတက်နော် အလည်ကို တိုး.. နောက်ကားပါတယ် ဆရာရေ မောင်း....."
ကားပေါ်ကို လှမ်းတက်လိုက်သည့် ခြေလှမ်းများ အထိုင်မကျခင်မှာတင် တုန့်ခနဲ အရှိန်မြှင့် မောင်းထွက်လိုက်သည့် ကားပေါ် အားကိုးတကြီး ကိုင်တွယ်စရာ ထိုင်ခုံနောက်မှီတန်းကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ ဆောင်းဦးနံနက်ခင်း အတွေးများ ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ် ကစဉ့်ကလျား ခုန်ပေါက် ကျန်ရစ်ခဲ့လေတော့သည်..။
၄း၄၆ pm, ၂၁-၁၀-၂၀၁၃